I-Starbucks, Unokwenza ngcono kwiNtlalo » Martech Zone
NgoLwesibini, nge-29 kaDisemba ngo-2015 NgoLwesibini, nge-29 kaDisemba ngo-2015 Douglas Karr
Nditsala ikhadi lemidiya yoluntu kancinci xa kufuneka. Ngokwam, njengomnini weshishini, ndihlala ndisoyika xa ndibona umthengi ebetha esidlangalaleni inkampani kwi-intanethi. Ingakumbi xa ingumgaqo-nkqubo kwaye ingeyiyo eyona mpazamo yommeli weenkonzo zabathengi. Ii-CSR's azisoloko zisenza imigaqo, ngesiqhelo umntu uphakama kwaye akukho ndawo inokufikelela ephatha ezo zinto.
Kule meko, nangona kunjalo, kuya kufuneka ndibelane ngesi siganeko esidlangalaleni kuba sikhomba kwimicimbi iinkampani ezininzi ezisokolayo nayo xa kufikwa kumajelo eendaba ezentlalo. Ngokunjalo, ayisiyiyo nayiphi na inkampani… luphawu olomeleleyo olunemida yenzuzo ephindwe kabini kwishishini eliphakathi. Oko kuthetha ukuba banako ukumamela, kwaye banakho ukulungisa lo mbandela ukuphucula imithombo yeendaba zentlalo bemi ngakwisiseko sabathengi.
Kule mpelaveki, ndibuyile eFlorida ndaya eIndiana. Luhambo endiluthathayo kwikota nganye kwaye ndiyakonwabela ukuqhuba ngokuzolileyo, ubuhle bendalo, kunye nexesha lokucinga ngezinto. Ndingumntu othanda ikofu.
EMcDonough, GA, ndaphuma I-75 ndahamba iimayile ezimbalwa ndaya kwiStarbucks. Xa ndingena evenkileni, ndingene kwigumbi lamadoda kwaye bendothukile. Inkunkuma yayiphuphuma kwaye umgangatho wawugqunywe. Andizukuchaza vumba, ngoku bekucaca ukuba kudala ulibele. Ayikuko ukuba andilindeli ukuba igumbi lokuhlambela elikufutshane kuhola wendlela oxakekileyo angabi nabala… kodwa esi yayingeyiyo isikhululo segesi, yayiyinkwenkwana endiyithandayo.
Ndime emgceni kwaye ndibukele enye i-barista ephethe ukuqhuba, kwaye enye ibaleka ijikeleza i-crazy ihambelana nomgca. Ndibala abasebenzi aba-5 abongezelelekileyo beme nje bengenzi nto. Emva kokufumana isiselo sam, ndiye etafileni kwaye kubonakala ngathi khange isulwe ngeeyure. Kwakukho izisongeli zeendiza kunye ne napkins ezazingcolisa umgangatho phakathi kokuchitheka. Ndincwinile ndaphumela ngaphandle apho ndithathe lo mfanekiso ndabelana ngawo kuTwitter.
@Ndiyabonga le venkile ingcolile. Ngaphakathi, ngaphandle, izindlu zangasese, yonke into. Kwaye iqela labasebenzi limi ngeenxa zonke. pic.twitter.com/gFFxKEya46
- Douglas Karr (@kwenze_k) Disemba 27, 2015
Khange ndifumane mpendulo, kodwa omnye umlandeli ungene wabuza ukuba ikho phi i-Starbucks… ndamphendula ke ndafaka ne-Starbucks.
@iqosweb @Ndiyabonga I-75 eMcDonough, GA. Indlu yangasese yayingaphaya kokuthatha ifoto.
I-Tweet yam yoqobo yayiku-2: 11 PM. I-Starbucks ekugqibeleni iphendule nge-4: 09 PM:
@iqosweb Sinenkxalabo- pls iinkcukacha ze-imeyile ku twittercustomerservice@starbucks.com w / ulwazi lwevenkile: https://t.co/osOKugph5J. Uxolo.
-I-Starbucks Uncedo (@starbuckshelp) Disemba 27, 2015
Ugh. Khange ndiphendule.
Mhlawumbi ngexesha leholide, i-Starbucks yemithombo yeendaba zentlalo yayixakeke kakhulu ukuba ingayihoya i-tweet yam. Yile tweet enye, akunjalo? Ewe, uhlobo. Kubo bonke abantu ababetyelele ivenkile emdaka ngaloo mini, ingaba ndim ndedwa owayebazisa ngomcimbi othile?
Bangaphi abantu abangengabo iiBuckees abangena kwaye baphuma kunye nale venkile njengomboniso wabo wokuqala? Bangaphi abalandeli bam abaphulukene nokholo oluncinci kuhlobo lophawu abaluthandayo. Bangaphi bobabini ngoku abakhangela enye ivenkile yekofu endleleni endaweni ye Starbucks ngenxa yokuba ukungqinelana kwevenkile zabo ezintle ngoku kuphazamisekile? Ndiyazi ukuba andizukuya kwivenkile ethile ngalo naliphi na ixesha kungekudala.
Nantsi into endiya kuthanda ukuyibona kwi-Tweet evela kwi-Starbucks:
Sikhathazekile, sibizwa ngokuba ngumphathi wevenkile. Ndiyi-DM ukuze sikwazi ukuyenza kuwe. UJason
Ngekhe kubenzima ukufumana ivenkile, ungasebenzisa iapps yeStarbucks okanye indawo yokugcina ivenkile:
Kwi-Starbucks kunye nayiphi na enye inkampani ejonge imidiya yoluntu, nazi izifundo ezifundwayo:
Ixesha lokuphendula -Njengoko ndandihleli e-Starbucks, ngekwakukuhle ukufumana impendulo. Iiyure ezimbini kamva zandibonisa ukuba abakhathali.
Ukuxhotyiswa -Ngaba umntu wakho wemidiya yoluntu ubuzile ngokwenene me ukuthumela i-imeyile umntu othile? Kutheni unganikwanga amandla okunxibelelana nomphathi wevenkile ngokwakho?
Hlisa umoya -Akusoloko kunokwenzeka ukuba iinkampani zenze impazamo, kodwa zinokuwunciphisa umba ngokubonisa uxabiso. Ukubonelela ngam ngetyala kwikhadi lam le-Starbucks bekuya kuba kulungile.
Yenza - Sonke siyayithiya imveliso engenagama. Ibizakuba yeyokuzibandakanya kunye neyobuqu ukusayina kunye negama lakho (ndicinga nje igama).
Ndisengumlandeli we-Starbucks kwaye ndiyathemba ukuba bayayimamela le ngxelo kwaye baphucule inkqubo yabo yokujonga ezentlalo.
tags: Social Media Marketingukubeka iliso kwimidiya yoluntuimpendulo kwimidiya yoluntuukubeka iliso kwezentlaloinkwenkweziiinkwenkwezi zentlaloTwitter